A Profaịlụ nke Teresa nke Avila
History & Culture Ụkpụrụ Dị Mkpa
Ihe ndekọ banyere Teresa nke Avila
Saint Medieval Saint and Reformer, Dọkịta nke Chọọchị
Dị ka Catherine nke Siena , nwanyị ọzọ aha ya bụ Dọkịta nke Chọọchị na Teresa nke Avila n'afọ 1970, Teresa jikwa oge ọgba aghara: e meghere New World maka nchọpụta tupu a mụọ ya, Njụta Okwukwe na-emetụta ụka dị na Spain, na Ndozigharị ahụ malitere afọ abụọ mgbe a mụsịrị ya na 1515 na Ávila n'ime ihe a maara ugbu a dị ka Spain.
A mụrụ Teresa n'ime ezinụlọ nke na-eme nke ọma, nke dị ogologo oge na Spen.
N'ihe dị ka afọ 20 tupu a mụọ ya, na 1485, n'okpuru Ferdinand na Isabella , Ụlọikpe nke Njụta Okwukwe na Spen nyere ya ịgbaghara "mkparịta ụka" -Jịws bụ ndị gbanweburu Iso Ụzọ Kraịst-ma ọ bụrụ na ha nọgidere na-eme omume ndị Juu na nzuzo. Nna nna nke Teresa na papa Teresa so n'ime ndi kwuputara ma we ghagharia n'okporo uzo di na Toledo dika ncheghari.
Teresa bụ otu n'ime ụmụaka iri n'ime ezinụlọ ya. Dika nwatakiri, Teresa bu onye ezi omume na onye ozo-mgbe ufodu, ngwakota nke ndi nne na nna ya apugh ime. Mgbe ọ dị afọ asaa, ya na nwanne ya nwoke hapụrụ ụlọ iji mee njem gaa n'ókèala Muslim ka a gbupụ ya isi. Nwanne nna ha kwụsịrị ha.
Na-abanye na Ngba
Nna Teresa zigara ya na 16 ruo Augustinian Convent Sta. Maria de Gracia, mgbe mama ya nwụrụ. Ọ lọtara mgbe ọ dara ọrịa, ma nọrọ afọ atọ na-agbake. Mgbe Teresa kpebiri ịbanye n'ebe obibi ndị nọn ahụ dị ka ọrụ, nna ya na mbụ jụrụ ịhapụ ya.
Ke 1535, Teresa ama odụk ufọk ufọk ufọk ufọk Carmelite ke Ávila, ebe obibi Monastery nke Incarnation. O weere nkwa ya n'afọ 1537, na-akpọ Teresa nke Jizọs. Iwu achọrọ Carmelite ka a na-edozi ya, ma ọtụtụ ebe ndị mọnk adịghị akwado iwu ndị ahụ. Ọtụtụ n'ime ndị nọn nke oge Teresa bi n'ebe obibi ndị nọn ahụ, ma mgbe ha nọ n'ebe obibi ndị nọn ahụ, gbasoro iwu ndị ahụ kama ịdapụ.
N'ime oge ndị Teresa hapụrụ ka ọ na-elekọta nna ya nwụrụ anwụ.
Teresa malitere ịhụ ọhụụ, bụ ebe ọ natara mkpughe na-agwa ya ka ọ gbanwee usoro okpukpe ya. Mgbe ọ malitere ọrụ a, ọ dị afọ 40.
N'afọ 1562 Teresa nke Avila tọrọ ntọala ya. O weghachiri ekpere na ịda ogbenye, na-adighi nma karia ihe di mma maka uwe, na igbokwasi akpụkpọ ụkwụ kama akpụkpọ ụkwụ. Teresa nwere nkwado nke onye nkwupụta ya na ndị ọzọ, mana obodo ahụ jụrụ, na-azọrọ na ha agaghị enwe ike ịkwado ebe obibi ndị nọn na-eme ka ịda ogbenye na-achị.
Teresa nwere enyemaka nke nwanne ya nwaanyị na di nwanne ya nwanyị n'ịchọta ụlọ iji malite ebe obibi obibi ọhụrụ ya. N'oge na-adịghị anya, na-arụ ọrụ na John John nke Cross na ndị ọzọ, ọ na-arụ ọrụ iji mee ka a gbanwee usoro nile nke ndị Kamel.
Site n'enyemaka nke isi nke iwu ya, ọ malitere ịtọ ntọala ndị ọzọ na-akwado usoro iwu ahụ. Ma o zutere mmegide. N'otu oge, mmegide ya n'ime ụlọ ndị Kamel gbalịrị ịkwaga ya na New World. N'ikpeazụ, ndị mọnk Teresa kewapụrụ dị ka ndị Carmel (Disposed Carmelites) ("na-ekwu okwu" na-ezo aka n'igbu akpụkpọ ụkwụ).
Ihe odide nke Teresa nke Avila
Teresa mechara dee akụkọ ya na 1564, kpuchie ndụ ya ruo 1562.
Ihe ka ukwuu n'ime ọrụ ya, tinyere ya Autobiography , edere na nchịkwa nke ndị ọchịchị n'usoro ya, iji gosipụta na ọ na-arụ ọrụ mgbatị ya maka ihe dị nsọ. Ọ bụ Njụta Okwukwe na-enyocha ya mgbe niile, n'ihi na nna nna ya bụ onye Juu. Ọ jụrụ ịrụ ọrụ ndị a, na-achọ ịrụ ọrụ kama ịchọta ọrụ na ịchọta ebe obibi ndị nọn na ọrụ onwe onye nke ekpere. Ma ọ bụ site n'ihe odide ndị ahụ anyị maara ya na echiche nkà mmụta okpukpe ya.
Odekwara ihe karịrị afọ ise, ụzọ nke izu okè , ma eleghị anya ya maara nke ọma, na-agwụcha ya na 1566. Na ya, o nyere nduzi maka ịhazigharịa ebe obibi ndị mọnk. Iwu ndị bụ isi ọ chọrọ ka ha hụ Chineke na Ndị Kraịst ibe ya n'anya, iwepụ mmetụta uche na mmekọrịta mmadụ na ibe ya maka ilekwasị anya na Chineke, na ịdị umeala n'obi Ndị Kraịst.
N'afọ 1580, ọ gụchara akwụkwọ edemede ya, Castle Interior. Nke a bụ nkọwa nke njem ime mmụọ nke ndụ okpukpe, na-eji ihe atụ nke nnukwu ụlọ. Ọzọkwa, ndị na-enyo enyo bụ ndị na-enyo enyo na-agụ akwụkwọ ahụ-na mgbasa ozi a nwere ike ịbụ n'ezie nye aka n'akwụkwọ ya mezuo ndị na-ege ntị.
N'afọ 1580, Pope Gregory nke XIII ghọtara n'ụzọ doro anya na Dispersed reform reform Teresa malitere.
N'afọ 1582, ọ gụchara akwụkwọ ntụziaka ọzọ maka ndụ okpukpe n'ime usoro ọhụrụ, Ntọala . Mgbe ọ na-ede ihe odide ya, o bu n'obi ịkọwa ụzọ nke nzọpụta, Teresa kwetara na ndị mmadụ ga-achọta ụzọ nke ha.
Ọnwụ na Ntụrụndụ
Teresa nke Avila, nke a makwaara dika Teresa nke Jisos, nwuru na Alba na onwa October 1582 ka o na-aga omumu. Njụta Okwukwe achọpụtabeghị ihe ndị ọ chọpụtara banyere echiche ya maka ịjụ okwukwe na mgbe ọ nwụrụ.
E kwuru na Teresa nke Avila bụ "Patros nke Spain" na 1617, e mekwara ya na 1622, n'otu oge ahụ dị ka Francis Xavier, Ignatius Loyola, na Philip Neri. A na-eme ya dọkịta nke Chọọchị-onye a kwadoro ozizi ya dị ka mmụọ nsọ na n'ikwekọ na ozizi chọọchị-na 1970.
Hemophilia na ụmụ Queen Victoria
Kedu mgbe Onye Nwanyi Onye Nduzi Gloria Steinem Ga-alụ?
Mkpa nke strokes na àgwà ndị China
Ihe ngwọta ngwọta
Gịnị mere ị ga-eji beowulf?
Ụdị Ụdị Dị iche iche: Nnukwu na Obtu
Kedu ihe ndekọ dị mma nke ụlọ akwụkwọ maka agụmakwụkwọ?
Chineke bụ Nna Anyị nke Eluigwe nke Eluigwe
Ihe ndị dị na Harry Potter Tumblr Ndị Dị Njọ, Ha Bụ Ọtụ
Okwu Nri Anyasị nke Seth Meyers White House
Cómo achọtaghị visa para trabajar temporalmente na Estados Unidos
Gaa na Shinnecock Hills, Otu n'ime Klọb Golf Golf
Top 9 Comic-Cons na US
Ònye Kpebiri Ụbọchị Ụwa?
Ihe omuma nke Francisco de Miranda
Ahịa maka Ụlọ Akwụkwọ: 5 Ihe Ndị Dị Mkpa Ugbu a
Kedu Ụbọchị Ufọchibido Anọ Na-arụ Ọrụ n'Afọ
Ihe niile I Kwesịrị Ịma Banyere Ndụ Ndị Gara Aga na Ịlaghachi
Ị Kwesịrị Dee Akwụkwọ Ozi Gị Maka Ụlọ Akwụkwọ Gụsịrị Akwụkwọ?
Ihe Ị Ga-achọ na Kọlịl Na-agagharị-Na Ụbọchị
Kwenye ma Na-akasi Obi
Na Omume, Ị ga - enwe ike ịkọ "Fuir" (ịgbapụ) Dịka Pro
2016 Nrite Nobel na Chemistry - Mkpụrụ Igwe Ala
Kedu ihe bụ nkọwa nke Immigrashọn na-akwadoghị?
Okwu ma ọ bụ okwu arụ ọrụ? Omume ịkpọ okwu
Foto ndị 'American Dad'
Eleanor nke ụmụ Aquitaine Site Eleanor, Queen of Castile